Sony Xperia Z5 amaliteworị imelite ya gam akporo 7 Nougat | Akụkọ akụrụngwa
Sony Xperia Z5 amaliteworị imelite ya gam akporo 7 Nougat
Nke a bụ ozi ọma maka ndị ọrụ niile nke ama ama Sony na nke ahụ bụ na mbata site na OTA nke ụdị gam akporo kachasị ọhụrụ abanyelarị ndị ọrụ nke ama a. Na nke a ọ bụ mmelite maka Sony Xperia Z5, mana Sony anaghị akwụsị na nsụgharị ọhụrụ na ụdị ndị ọzọ dị na usoro Z nwere ike ịbịa n'oge adịghị anya.
Na ụkpụrụ ihe anyị nwere n’elu tebụl bụ mmelite maka Xperia Z5 na nke a ga-abụrịrị ume ikuku ọhụrụ maka ngwaọrụ ndị a. Sony ji nsụgharị beta mee ihe na Xperia Z ma taa ha enweela ihe nlereanya ọzọ na ndepụta ha na ụdị nke sistemụ arụmọrụ kachasị njikere ịga, yabụ anyị nwere ike ịsị na e mere ezigbo ọrụ.
A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ ahụ mana ọ bụrụ na ọ bụ maka ihe ụfọdụ ọ pụtaghị na ntọala ngwaọrụ gị maka nbudata site na OTA, ị nwere ike ịnweta ya site na mmemme gọọmentị wee budata ya na kọmputa gị wee nyefee ya na ngwaọrụ ahụ. Ozi a na-abịa otu ọnwa mgbe usoro Sony Xperia X na X Compact usoro natara ụdị ọhụrụ ahụ.
Na blog nke Xperia Ga-ahụ ozi ndị ọzọ gbasara mmelite a, mana ihe dị mkpa bụ na ọ dịlarịHey ntakịrị ntakịrị ngwaọrụ ndị ọzọ na-emelite na ụdị nke gam akporo a. Enwere olile anya na ụdị ndị ọzọ, ndị Japan Sony, ga-enwetakwa mmelite ahụ maka ụdị OS kachasị ọhụrụ dị, mana nke a bụ ihe na-abịa nwayọ nwayọ ọbụlagodi dịka anyị kwuru n'oge gara aga, nwayọ nwayọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Sony Xperia Z5 amaliteworị imelite ya gam akporo 7 Nougat
Enweta ego sitere na Storelọ Ahịa App na Google Play nwetara mmụba dị egwu n'afọ gara aga